६ महानगरपालिकाको बजेट ३७ अर्ब : सबैभन्दा बढी काठमाडौंकाे, कम भरतपुर - ११ असार २०७५, NepalTimes
६ महानगरपालिकाको बजेट ३७ अर्ब : सबैभन्दा बढी काठमाडौंकाे, कम भरतपुर
११ असार २०७५
काठमाण्डौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कामपाले आयोजना गरेको नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनमा उपप्रमुख हरीप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो सँगै काठमाण्डौँ महानगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट बनाउने स्थानीय तह भएको छ ।
काठमाण्डौँको बजेट चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कामपाले चालू आव २०७४÷०७५ का लागि १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नेपालभरीका ७५३ स्थानीय तहले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन । ६ वटा महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटको स्रोतमा काठमाडौंको आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, बाह्य स्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड र अन्य स्रोतबाट १ अर्ब ४ करोड ११ लाख अनुमान गरिएको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ३अर्ब २८ करोड ८४ लाख ७ हजाररुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन अनुमानित खर्चको २५.५३ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी चालू आवमा १२ अर्व ८७ करोड ९४ लाख रुपैयँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा आन्तरिकतर्फ ५ अर्व ४८ करोड १६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ७ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपछि दोस्रो ठुलो बजेट ल्याउनेमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका रहेको छ । पोखरा लेखनाथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १९ करोड र बाह्य आम्दानीबाट ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा चालु तर्फ १ अर्ब १ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
विराटनगरले २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
सबैभन्दा कम बजेट हुने महानगरमा भरतपुर रहेको छ । भरतपुुरको बजेट ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।(विकास न्युज)
गएको ३३ महिनामा करिब साढे ४७ अर्बको राजश्व छलेर आर्थिक अपराध
ताप्लेजुङमा किन भइरहन्छ आगलागीका ठूला घटना ?
मुलुकभर २० जिल्लामा जग्गा अतिक्रमण, सबैभन्दा धेरै सुनसरी जिल्लामा
राजनीतिक संकट गहिरिँदै, अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी
ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको बजेटमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रमणमा
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्यो
ताप्लेजुङ्गका आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारको राहत
अर्थमन्त्रीले मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको शिलन्यास गर्न तयार गरिएको मञ्च स्थानीयले भत्काइदिए
कोरोना खोप अन्य खोप जस्तै रहेछः गणेश प्रसाद तिमिल्सिना
कोरोना अपडेटः आज थपिए १०७ संक्रमित, ७८ जना डिस्चार्ज
सम्झना हत्याका अभियुक्त लालबहादुर खत्री सार्वजनिक, म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै
ट्रम्प समर्थकले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने सूचना पाएपछि वाशिङ्टनको सुरक्षा व्यवस्था कडा
मधेसमा केपी ओलीलाई पस्न नदिए पनि पानी चाहिँ नरोक्नु होलाः प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय सभाले तीन वर्षमा के–के गर्याे ?
नेपाल एयरलाइन्सका चार पाइलटलाई उडानमा रोक
इटहरीमा आइतबारदेखि सबै वडाबाट कोरोना खोप लगाइने